Soomaaliya Oo Maanta Ka Hor Hadli Doonta Maxkamadda ICJ – Goobjoog News
Maanta oo Talaado ayaa lagu wadaa in qareennada u doodaya Soomaaliya ay ka hor hadlaan maxkamadda ICJ oo shalay ka bilaabatey dhageysiga dacwadda ku aadan muran badeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Qareenada ayaa ku doodi doona in dacwada murankaa Badda ee Soomaaliya iyo Kenya go’aan looga gaaro maxkamadda ICJ.
Waxay soo bandhigi doonaan caddeymo buuxa oo ku aadan in badda hadda lagu murmayo ay leedahay Soomaaliya.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa rajo aad u wanaagsan ku muujiyey in Soomaaliya ay guul ka gaari doonto dacwaddan, maadaama lahayo caddeymo badan, shakina aanu ku jirin in Soomaaliya leedahay baddaasi.
Qareenada Kenya ee shalay tagey maxkamadda ICJ waxay ku doodeen in dacwaddan aaney qaadin ICJ, islamarkaana si hoose ugala hadlaan Soomaaliya.
Guddiga Gurmadka Qaxootiga Yemen Ee Gobalka Bari Oo Ka Hadlay Qorshaha Dadkii Shalay Soo Gaaray Magaalada Boosaaso
buy kamagra oral jelly: buy kamagra oral jelly - kamagra 100...
[url=https://avcialis.com/]costco pharmacy cialis prices[/ur...
Facing some issues to Login to Cash App but not able to ther...
Can you send money from cash app to paypal
Can i transfer money from cash app to paypal? Then you are r...